Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf [Sawirka: Reuters]
JABUUTI - Dowladda Jabuuti ayaa beenisay wararka sheegaya in Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu booqasho ku tegayo Magaaladda Asmara ee caasimadda dalka Eritrea.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dowladda Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf ayaa gaashaanka ku dhuftay wararkaas, isagoo sheegay in aan xilligan suurta-gal ahayn in Geelle uu booqasho ku tago Eritrea, madaama aysan ka heshiin labada dal khilaafka u dhaxeeya.
Maxmuud wuxuu daboolka ka qaaday in inta uu taagan yahay xiisadda kala dhaxeysa xukuumadda Asmara uusan Madaxweyne Geelle tagi doonin dalka Eritrea oo colaada kala dhaxeysay tan iyo 2008-dii, taasoo salka ku haysay muran dhanka xuduuda ah.
“Waxaa jira warar leysla dhex-marayo oo sheegaya in Madaxweyne Geelle uu socdaal ku tagayo Eritrea, waxaan rabaa inaan ka saxo warkaas warbaahinta, oo aan u sheego in warkaasi uu been yahay, oo aan waxba ka jirin,” ayuu yiri Wasiirka.
Jabuuti iyo Eritrea ayaa waxaa ka dhaxeeya muran dhanka xuduudka ah, halkaasoo ay dhaceen marar badan dagaalo kharaar, xili waqti xaadirkaan ciidamo ka kala socda labadda dhinac ay wali isku hor-fadhiyaa goobaha la isku heysto.
Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti wuxuu kusoo beegmayaa maalmo un kadib markii wakiilka gaarka ah ee Jabuuti u qaabilsanaa Qaramadda Midoobay ka dalbaday Gollaha amaanka ee QM inay dhex-dhaxaadiyaan labada dowladood.
Sidoo kale, dowladda Itoobiya ayaa shaacisay inay dhex-dhexaadinayso labada dal, si dhamaan wixii khilaaf ahaa ee ka jiray gobolka Geeska Africa loo dhameeyo, islamarkaana laga faa'idaysto isbedelka socda.